Igumbi lokulala elikhulu eliphakathi nendawo eMálaga - I-Airbnb
Igumbi lokulala elikhulu eliphakathi nendawo eMálaga
Ikamelo e-iyunithi yokuqasha ibungazwe ngu-Anna
Ngiyakwamukela kuleli gumbi elithokomele labantu ababili efulethini lami elisenkabeni yedolobha elidala laseMálaga! Indawo imaphakathi nendawo ngakho iseduze nazo zonke izinhlobo zezokuthutha zomphakathi, izindawo zokudlela eziyinhloko, izindawo zokudlela, impilo yasebusuku, kanye nolwandle, ichweba kanye nemisebenzi elungele umndeni! Yebo, kuyiqiniso, uzobe uhamba ibanga ukusuka kukho konke :)
Igumbi lami lihlanzekile futhi lithokomele, litholakala endaweni engcono kakhulu yokuhlola i-Malaga. Kuphinde kuthule kakhulu ukuze ukwazi ukujabulela ukulala kahle ngisho noma uzohlala enhliziyweni yenkaba yedolobha ephilayo.
4.88 · 156 okushiwo abanye
Ngihlala endaweni emaphakathi, uzokwazi ukuhlola yonke into ezungezile ngokunethezeka okukhulu nokuvumelana nezimo, noma ngabe ukuvakashela idolobha noma ukuya olwandle. Futhi, isakhiwo sami sinesistimu yokuphepha futhi siphephe kakhulu.
I am friendly and energetic, I love nature and travelling and I am happy to welcome you the best I can !
Ngiyajabula ukukusiza ngalo lonke ulwazi engingakwazi mayelana neMalaga ne-Andalucia!